सम्बन्ध विच्छेदको निहुँमा दुई परिवार सखाप, पहिले पनि भएको रहेछ प्रयास - Nepali Headlines,Nepal News, Nepali News, News Nepal
सम्बन्ध विच्छेदको निहुँमा दुई परिवार सखाप, पहिले पनि भएको रहेछ प्रयास
८ जेठ, पाँचथर। श्रीमती मनकुमारी शेर्मासँग सम्बन्धविच्छेद गर्नुपरेको बदलामा पाँचथरको मिक्लाजुङ–७ लिम्बाका मानबहादुर माखिमले ससुराली र साढु दाइका दुई परिवारका सबै सदस्यको हत्या गरेको प्रहरीको प्रारम्भिक अध्ययनले देखाएको छ ।
सम्बन्धविच्छेदको निहुँमा पाँचथरको मिक्लाजुङ–३ आरुबोटेका बमबहादुर फियाक र धनराज शेर्माको परिवारका नौ जनाको गत राति वीभत्स हत्या भएको प्रहरीले स्थलगत अध्ययनपछि जनाएको होे । जिल्ला प्रहरी कार्यालय पाँचथरका प्रहरी निरीक्षक अनिलकुमार पौडेलले सङ्घीय प्रहरी एकाइ धरानको टोलीसमेतको प्रारम्भिक अनुसन्धानबाट माखिमले नौ जनाकै हत्या गरेको देखिएको बताउनुभयो । सोमबार राति फियाक र शेर्माको घरमा रहेका नौ जनाको वीभत्स हत्या भएको थियो ।
चार जनाको विभत्स हत्या गरिएको मिक्लाजुङ गाँउपालिका वडा नं. ३ आरुबोटेका बमबहादुर सम्बाहाम्फे घरमा तालिमप्राप्त कुकुरसहित अनुसन्धान गर्दै प्रहरी टोली ।
चार जनाको विभत्स हत्या गरिएको मिक्लाजुङ गाँउपालिका वडा नं. ३ आरुबोटेका बमबहादुर सम्बाहाम्फेको घर । घरलाई प्रहरीले अनुसन्धानअघि शिल गरेको थियो ।
पाँच जनाको विभत्स हत्या गरिएको मिक्लाजुङ गाँउपालिका वडा नं. ३ आरुबोटका धनराज शेर्माको घर । घरलाई प्रहरीले अनुसन्धानअघि शिल गरेको थियो ।
प्रमुख जिल्ला अधिकारी मुरारी वस्तीका अनुसार प्रदेश प्रहरी कार्यालय तथा जिल्ला प्रहरी कार्यालयको प्रहरी टोलीको अनुसन्धानपछि नौवटै शवको मुचुल्का उठाई परीक्षणका लागि बिपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान धरान पठाइएको छ । “साँझ मुचुल्का बनाई सकिएको छ”, प्रजिअ वस्तीले भन्नुभयो, “भोलिबाट थप अनुसन्धान र शव परीक्षणको काम अघि बढाउन निर्देशन दिएको छु ।” घटनाको अनुसन्धानका लागि तालीमप्राप्त कुकुरसहित सङ्घीय प्रहरी एकाइ धरानबाट प्रहरी वरिष्ठ उपरीक्षक शरद खत्री नेतृत्वको टोली घटनास्थलमा खटिएको थियो । रासस
Nextअष्ट्रेलियाको मेलवर्नमा ‘द भ्वाइस अफ नेपाल’ले दिँदैछ धमाकेदार साङ्गीतिक प्रस्तुति